Shiinaha MR5 Marble warshad wax lagu nadiifiyo Crystallizer & soosaarayaasha | Jinqiu
MR5 waa badeecad daryeel dabaqa marmar ah oo la wanaajiyey si dib loogu buuxiyo ama loo nadiifiyo dusha marmar. Waxay si dhakhso leh u dayactiri kartaa xoqitaanka laga sameeyay dusha marmarka iyadoo la adeegsanayo, dib loo soo celin karo ama la hagaajin karo dhalaalka dusha.
MR5 waa wax soo saar marmar marmar caadi ah, isticmaalka badan ma beddeli doonto muuqaalka dabiiciga ah ee marmar.
Tikniyoolajiyadda gaar u lahaanshaha ee loo yaqaan 'patent intration penetration' ayaa ka dhigaysa dusha marmarka la farsameeyay mid cufan, adag oo u adkaysta xirashada, iyo "dhalaalaya laakiin ma siibanayso"
Shayga waxaa loo isticmaali karaa dhamaan dhagxaanta ay ku jiraan kaalshiyamka karbonat iyo magnesium carbonate, sida marmar, nuuradda, marmar macmal ah iyo terrazzo.
Muuqaal Dareeraha cad
Xirxirida 4CANS / CTN
Miisaanka 4.5KG / Can
Codsiga: Marble, travertine, dhagax macmal ah iyo terrazzo
MR5 waa badeecad daryeel sagxad marmar la kobciyey oo dib loogu dhisayo ama lagu nadiifinayo dusha marmar. Waxay si dhakhso leh u dayactiri kartaa xoqitaanka laga sameeyay dusha marmarka iyadoo la adeegsanayo, dib loo soo celinayo ama la hagaajinayo dhalaalka dusha sare. Dayactirka joogtada ahi wuxuu ilaalin karaa iftiinka wanaagsan muddo dheer, isla mar ahaantaana sameysma lakab dusha sare oo dhalaalaya, adkeysi kara. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu ilaaliyo dhagax macmal ah.
Crystallization waa hab dib loogu sameeyo dhalaal dhalaalaya kaalshiyamka sagxadaha dhagxaanta sida marmar, nuuradda iyo travertine, si kor loogu qaado dusha sare. Nidaamku wuxuu ku buufinayaa birta wax lagu nadiifiyo ee sagxadaha oo wuxuu ku dhajinayaa mashiinka dabaqa oo leh dhogor bir ah ama suuf. Mashiinka ku lifaaqan suufka mashiinka wuxuu abuuraa kuleyl leh dhalada kareemada, iyo abuurista iskuxir cusub oo marmar ah, tan, si loo ilaaliyo marmarka iyadoo la ilaalinayo midabkiisa sii xumaanaya iyo ilaalinta dhalaalka dhagaxa. Waxaa loo isticmaalaa nadiifinta marmarka gudaha oo kaliya heer walbana wuxuu baarayaa dalabkiisa wax ku oolka ah sida xafiisyada, suuqyada, dhismooyinka dadweynaha, guryaha gaarka loo leeyahay iyo hoteelada.
Nadiifi dhulka oo qalaji.
Rux gasacadaha kahor isticmaalka.
In yar oo MR3 ah ku shub dabaqa (5-10ML / m2)
Lagu rakibay suufka dabaqa midabka cad ama dhogorta birta ah mashiinka sagxadda (Xawaaraha 175rmp, ama 154rmp).
Ku buuxi mashiinka wax lagu nadiifiyo ilaa uu ka qalalayo
Ku celi hawlgalka 3-5 tallaabo illaa inta uu dusha sare ka sii xoogaysanayo oo dhalaalayo.
Haddii markii ugu horreysay ee la isticmaalo, loo baahan yahay in lagu celiyo 2 illaa 3 jeer caadi ahaan.
Ku nadiifi boodhka xaaqin qalliinka ka dib. Dayactirka kaliya nadiifinta hal mar waa ok.
Hore: MR3 Marmar Polish Crystallizer
Xiga: HAL TALAABAD Crystallizer buufin N 'BUFF -2501
Marmariista Nadiifinta Qurxinta
Kaluumeyste loogu talagalay marmarka iyo dabaqyada terrazzo –AG ...